म मण्डले हैन राष्ट्रसेवक हुँ : प्रेम सञ्जेल | Safal Khabar
विहीबार, ०१ असोज २०७७, १६ : १०
हाम्रो देशमा अस्तिको तारिख पर्सि दिएर पाँच रुपैयाँ खाने कर्मचारी छन् । म जापानमा पढेर आएको, दिमाग, कार्यप्रवृत्ति अनि शरीरमा जापानी सेवा सवार छ । मलाई सेवाग्राही आउनेबित्तिकै ऊ किन आएको हो र उसको काम किन हुन सक्दैन भनेर तुरुन्तै भनिदिनुपर्छ । नहुने भए कसैलाई चिया, नास्ता घुस खुवाएर नबस्नोस्, बीस वर्ष धाए पनि हुँदैन, कानुनले मिल्दैन भनेर प्रष्ट भनिदिनुपर्छ । मान्छेले झुलाएर न घुस खाने हो । घुस्याहा कर्मचारीलाई यो काम गर भनेर दबाब नदिए कसलाई दिने त । पाँच मिनेटको कामलाई घण्टौँ लगाएपछि किन भएन भनेर सोध्न पाउने कि नपाउने ? मलाई त कम्प्युटर, प्रिन्टर, गाडी, साइकल, कलम चलाउनदेखि दर्ता चलानी गर्न सबै आउँछ, यसैले कसैलाई पर्खिन्न, आफैँ गरिदिन्छु । पाँच मिनेटको कामलाई ४५ मिनेट लगाएपछि सहने कुरा आउँदैन । म रोगी, मुढी, सन्की जस्तो काम नलाग्ने भएको भए नेपाल सरकारले ४० वर्ष किन जागिर दिने, पहिले नै खारेज गरिदिएको भए हुन्थ्यो ।
मलाई ०३८ साल कात्तिक २८ गते जाँच लिएर सरकारी सेवामा पहिलो नियुक्ति दिने न्यायाधीश काठमाडौं घट्टेकुलोमा बस्नुहुन्छ । जागिरको दौरान एक लाख ६ सय ३२ जना कर्मचारीसँग म बसिसकँे । ती कर्मचारी कसैले प्रेम सञ्जेलले यो अड्डामा काम गर्दा यसरी घुस खायो भनिदिए हुनेथियो । मैले एउटै अड्डामा सात वर्ष काम गरें । अर्बौं बजेट भएको शान्ति मन्त्रालयमा प्रवक्ता भएर बस्दा लाखौँ कमाउन सक्थें होला तर सरुवा–बढुवामा घुस खान खोज्दा सचिवलाई नै भकुरें । मलाई फेन्टा, फ्रुटी, पेप्सीकोला जसले खुवाउला त्यसका बाउको र बाउ नभए आमाको रगत होला । बाबुआमा दुवै नभए खुवाउनेकै रगत होला भनेर सेवा प्रवेश गरेको मान्छे मैले त्योभन्दा सस्तो चिज त के खाएँ होला र त्यो नै म खान्न भने घुस खाने त प्रश्नै आउँदैन ।
घुस नखाने, ड्याङ ड्याङ भन्ने हुनाले मलाई पहिलेदेखि नै खुस्केट मात्र हैन पागल भन्थे । म तेह्रथुममा शिक्षा कार्यालयमा काम गर्दा पाँच सय २१ शिक्षकको जागिर खुलेको थियो । त्यो बेला फोटोकपी थिएन । आफ्नै हातले, मसी खाने पेनले प्रश्नपत्र लेखेको थिएँ । त्यो बेला मेरो आफ्नै कान्छो सालो फेल भएको थियो । ऊ मसँग आजसम्म बोलेको छैन । उसले मलाई भिनाजुले ट्युसन पढाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको थियो तर मैले भ्याइनँ । त्यही बेला मलाई पाँच लाख घुस खान भनेका थिए, मानिनँ । र, मलाई त्यहीबेलादेखि पागल भन्न थालेका हुन्, ‘खुस्केट’ त अलि इज्जतिलो शब्द भयो ।
मेरो बोली अलि तीतो र छुच्चो छ । विदेशसँग सन्धि गर्नुप¥यो भने अक्षरदेखि कमासम्मको मस्यौदा लेख्ने भनेकै हामी कर्मचारी हो । सन्धिमा यसो भयो, उसो भयो भनेर राजनीतिज्ञको बदख्वाइँ त गर्छौं तर खेस्रा गर्दा यहाँनेर नराम्रो छ, राष्ट्रहितमा छैन भनेर हामीले किन नभन्ने ? कर्मचारी ठीक भएको भए नेता, नेता ठीक भएको भए कर्मचारी तलमाथि सर्न सक्ने थिएनन् । सबै नेता–कर्मचारी खराब छन् भन्दिनँ तर हाम्रो दुर्भाग्य, सबै नेता घुस र कर्मचारी कमिसन खाने भए ।
मेरो बाजेले भन्थे रे, भैंसी गोठालाको हित गर्ने हो भने लैनो, थारे, लाहुरे, गुजराती, कण्ठे जे भए पनि एउटैले हुन्छ । कर्मचारीको हित गर्न पनि एउटै संगठनले पुग्छ । निजामती कर्मचारी संगठन मात्र भएका बेला म राष्ट्रिय पार्षद् बनेँ । त्यो बेला संगठन दुई पार्टी भएर फुट्यो । मलाई कार्यकाल पूरा गर्न सकस भयो । त्यसपछि मण्डलेको विरुद्ध बोल्दा ७ सय रुपैयाँ धरौटी राखिदिने मान्छे नभएर म जेलमा सडिएको छु । ०३६ सालअगाडि मण्डलेविरुद्ध लाग्दा खानु सास्ती पाइएकै हो । अहिले आएर तिनै हिमायतीले मलाई मण्डले भन्छन् भने कसैलाई केही भन्नु छैन । म मण्डले हैन राष्ट्रसेवक हुँ ।
मैले भ्रष्टाचार निवारणका लागि ६ पेजको कार्यपत्र बुझाएको छु । र, प्रमुख आयुक्तका लागि २०६९ मा दरखास्त दिएको थिएँ । स्नातकोत्तर छु, ४० वर्ष सेवा गरिसकेको छु, भ्रष्टाचार गरेको छैन, प्रष्ट दृष्टिकोण छ । त्यो बेला पनि प्रमुखबाहेक माइलो, साइँलो आयुक्त खान्नँ भनेर दरखास्त हालेको थिएँ । प्रेम सञ्जेल अख्तियार प्रमुख भयो भन्ने समाचार आयो मात्रै भने पनि १० प्रतिशत भ्रष्टाचारीले कि देश कि त भ्रष्टाचार छाड्छन् ।
घुस्याहा बोलीमा एकदम राम्रा, मजस्तो तीतो बोल्दै नबोल्ने हुन्छन्, ब्वाँसाले पहिले भेडालाई काखमा राखेर कन्याउँछ । भेडोचाहिँ ब्वाँसोले मलाई माया ग¥यो भन्दै मख्ख परेर सुतिदिन्छ । तर, यही मौका छोपेर व्बाँसोले आन्द्राभुँडी एकै तालमा निकालिदिन्छ र ठहरै मारिदिन्छ । त्यस्तै, मीठो बोल्ने, मृदुभाषी घुस खाइसकेपछि कर छल्न पनि सिकाइदिनेहरू नै भ्रष्टाचारी हुन् । भ्रष्टहरूको ६ वटा नाम हुन्छ, घुस्याहा, छुल्याहा, रक्स्याहा, कप्ट्याहा, भुस्याहा, जँड्याहा । सावधान हुनुहोस् यिनले काखमा राखेर घाँटी सेर्छन् । (जनआस्था)